Ukugqilazwa - UTimothée de Fombelle: “Umuntu ngamunye wayehluthwa impilo yakhe yonke! "- UJeune Afrique - UTELE RELAY
Ukugqilazwa - UTimothée de Fombelle: “Umuntu ngamunye wayehluthwa impilo yakhe yonke! "- Intsha yase-Afrika
By TELES RELAY On Agasti 1, 2020
Ku- "Alma, le vent se lève", isazi esingumlobi saseFrance sinikezela ngengxenye yokuqala ye-trilogy enikelwe emlandweni wobugqila.
Umbhali aziwa UTobie Lolness, umzekeliso wendalo kanye nenkondlo emhlabeni wanamuhla, uTimothée de Fombelle ulandela engomeni yakhe entsha ye-Oko entsha, okuyingxenye yomndeni wayo owathunjwa ngabathengisi bezigqila, uJoseph, umgibeli waseFrance owayesemkhunjini womkhumbi wezigqila, kanye nenqwaba yabanye abalingiswa. Ingxenye yokuqala ye-trilogy ene-verve enamandla, isekelwa yimibhalo ecebile futhi ephethwe ngokubhala okuzwayo njengoba kususiwe.
Intsha yase-Afrika: Alma, i-fresco enkulu ngobugqila osanda kuqala, yazalwa kusukela e-Afrika lapho usemusha.
I-Timothée de Fombelle: Lapho ngineminyaka ecishe ibe mihlanu, ngahlala unyaka owodwa eMorocco, e-Agadir. Ubaba wayengumakhi wezakhiwo futhi ehlela idolobha, wayephethe uhlelo lwedolobha elikhulu. Le nkathi yavumela umfanyana omncane waseFrance owazalelwa eParis ngomhlaka 5 ukuthi ngibe ngumuntu otholwayo ozithobile kwenye indawo. Kamuva, cishe ngineminyaka eyi-14, ngahlala iminyaka emibili e-Ivory Coast, ubaba wami wasebenza e-Urban Planning Workshop e-Abidjan. Ekolishi laseJean-Mermoz, ngakwazi ukuhlangana nabantu abaningi. Kwakuyisikhathi sokutholwa okukhulu kakhulu. Kwakungekho mqondo nathi ngokwakha kabusha uhlobo lweFrance encane phesheya, futhi i-Abidjan yisiqalo sendawo yokuya eMali naseGhana. Namuhla, lapho kufanele ngizithole ngesikhathi, ngiyabona ukuthi yonke inkumbulo yami yakhelwe kulo mzuzu: kukhona ngaphambi nangemva kweCôte d'Ivoire.
Ngabe ushintshe ngaleso sikhathi?
Ushintsho luxhumene nokususa, kuya kwenye indawo, okuyizinto engizibhalayo engikubhalayo. Ukuzitholela e-Abidjan kuyisihambeli esizizwa sihle futhi kungivumele ukuba ngithole izimpilo ezihluke kakhulu kwezami, lapho ngangiseseminyakeni yobusha bami. Kwangiguqula. Kulesi sikhathi, izipanji ezibucayi kakhulu kulokho okusizungezile, futhi nabazali bethu abakwazi ukubona ubukhulu bokuthi sibhekene nani. Njengomuntu osemdala, ngangifuna ukuhamba. EVietnam, njengomfundisi osemusha, ngabona ukuthi ngangibheka i-Afrika e-Asia!
Kwasala umkhondo wokudlula kwalaba besilisa nabesifazane odongeni lobumba lwamapishi
Kusuka e-Ivory Coast lapho uthola khona izinqaba ezakhiwe ogwini ...
Ngesikhathi samaholide ama-All Saints, sasuka saya eGhana, enqoleni yethu esiteshini saseMazda. Sivakashele yonke intambo yamafoloko engikhuluma ngawo Alma: Elmina, Cape Coast, Shama. Ngekhamera yami entanyeni yami, bengingazi ukuthi ngizoyithola ini lapho sifika okokuqala kwalezo zinqaba ezimhlophe zehlela olwandle. Akungatshazwa ukuthi ngangizwile ngenhlekelele yobugqila, kodwa kwakuyinto engaqondakali. Lapho, unogada wasichazela ngokwenzeka ngempela kule ndawo lapho izinkulungwane zabantu base-Afrika - izigidi ngaphesheya kogu - zidlule khona ngaphambi kokufakwa i-Atlantic. Kwasala umkhondo wokudlula kwalaba besilisa nabesifazane odongeni lobumba lwamapherishi enqaba. Kwakumangalisa.
e Alma, izinhlamvu eziningana ziqaphela iqiniso ngendlela efanayo.
Yebo, loluguquko luphefumulelwe ukuqaphela kwami ​​uqobo futhi ikakhulukazi indlela engingathanda ukuthatha abafundi bami. Singafunda ukuthi inqwaba yabantu idingiselwe kwelinye izwekazi, kepha yayingabantu abanomlando wabo ngamunye. Umuntu nomuntu wayekelwa phansi impilo yakhe yonke! Lokhu ngikubonile ku-Elmina.
“I-Alma, le vent se lève”, ebhalwe nguTimothée de Fombelle, yashicilelwa nguGallimard Jeunesse ngoJuni 11, 2020. © François Place / Gallimard jeunesse 2020
Ngabe ubhale okuningi?
Yebo, ngenza njengocwaningo ngenkathi ngibhala. Imibhalo yami ihlukahlukene. Kunezincwadi zomlando ezihlanganisa esikwaziyo ngokuhweba ngezigqila kwe-Atlantic, njengalekaMarcus Rediker emikhunjini yezigqila, ubupopayi nakho konke ukunakekela kolwandle. Unombono omuhle kaMarxist ngalo. I-Atlantic yekhulu leshumi nesikhombisa futhi inentshisekelo kwabona abakhubazeke kakhulu. Ngifunde nezifundo ezithile ngqo, kufaka phakathi eyodwa ekushusheni eLa Rochelle. Futhi, ngibonga uGallica, umtapo wezincwadi we-inthanethi weBnF [Ilabhulali Yesizwe yaseFrance], ngakwazi ukufinyelela ezinqolobaneni ezingavuthiwe eziyizincwadi zomkhumbi, ngobufakazi obuningi obuvela kubathengisi bezinceku, okuyinto ephazamisa kakhulu. .
Izindaba zezigqila azivamile
Izinganekwane zezigqila, ezifana nezika-Olaudah Equiano, ezinikeza iphuzu lokubuka kusukela ekubambeni hhayi kusuka emphemeni ophezulu, akuvamile kakhulu. Kunobufakazi abambalwa obuvela emithonjeni yokwahlulela okutshela ukuhamba nokuwela izigqila ezithile, kepha zingabalwa ngeminwe yesandla esisodwa, kanti lezo eziphathelene nokuphila emasimini ziningi kakhulu. Ngizibhalele ne-Afrika yakudala. Ucwaningo kule ndawo luye lwajula eminyakeni yamuva, ikakhulukazi ngenxa yencwadi kaFrançois-Xavier Fauvelle. Futhi-ke kukhona nemisebenzi yabantu abathile abahlanya, njengoJean Boudriot, owabhala esikebheni esabizwa Ukuntwela!
Nguye okuphefumulele I-Amelie Emnandi, lapho u-Alma aqala khona ...
Yebo, lesi sikebhe sahamba ngonyaka we-1784, eminyakeni emibili edlule I-Amelie Emnandi. Nginezibhamu ezingamashumi amahlanu noma ezingamashumi ayisithupha zalo mkhumbi nohlaka lwazo olungivumela ukuba ngihambe ngakuwo. Ukuntwela washiya iRochefort, lapho eyakhelwe khona, eyokuwela ngokweqile. Wafika eSenegal, wabe esehamba ngesikebhe ngasogwini waya embusweni waseKongo. Ngemuva kwalokho, yawela i-Atlantic ibheke eSanto Domingo, lapho ukuphakama kobukhazikhazi bayo. Ukuhweba ngezigqila kwakuqinile lapho ukuvumela ukukhiqizwa kashukela.
Imemori iqala ukuba yiphila ngenkathi singayifaka ngombono
U-Alma ungomunye wabamele bokugcina babantu be-Oko. Ngabe laba bantu babekhona ngempela?
Cha, kuyingxenye yami yemicabango. Bengidinga le nkululeko emhlabeni wangempela engiwuchazayo ngokuvusa umbuso waseBoussa, umfula iNiger, i-Ashantis. Ngihlupheke kakhulu ngenkathi ngifunda lokho obekukhona ezincwadini ngesihloko: izindlela ezijwayelekile zabathunjwa abasebasha ... ngohlobo oluthi "Phila impilo yami njengesigqila"! Imemori iqala ukuba yiphila ngenkathi singayifaka ngombono. Le ndlela ukuphela kwendlela yokumhlonipha. Ngakho-ke ngadala i-Okos, engivumela ukuthi ngisondele emnandi ngalomqondo wabantu, lapho behliswa, begcizelela amandla kanye namathalente. Kakhulu kangangokuba bacishe bazuze amandla amakhulu.
Kukhona i-orisha enaleli gama ...
Lesi sizwe siwuhlobo lwendlela ebunjiwe ngayo, ikholaji ethize enezinto ezibolekwe empucukweni eyahlukahlukene. Ngifunde indaba yedolobha elilahliwe ngokushesha okukhulu, kungekho owaziyo ukuthi kungani, nokuthi sithole kuphi izimbiza eziningi. Kusezinkingeni zalolu hlobo lwemfihlakalo engizisungule laba bantu. Igama ngokwalo lingumbumbi, noma ngabe kukhona abantu be-Oyo ...
Kunesici somlingo inoveli yakho. Ingabe kungenxa yokuthi kuvame ukuhlotshaniswa nezwekazi?
Bengifuna ukuthi kube nomlingo othile - lapho ehlala phansi, izitshalo zikhule ngaphansi kukamfowabo ka-Alma - ngoba lolo hlobo lwamehlo luyangigudluza. Kepha bengingeke ngisebenzise iSpider-Man superpower, bengidinga ukusekela lo mlingo kumasiko ase-Afrika, izingoma kanye nabashayabhuthi ikakhulukazi. Unina ka-Alma, obamba umkhumbi ndawonye nengoma yakhe nendaba yakhe, angizange ngiyisungule. Emkhunjini wezigqila, owesifazana wayeshiyelwa ukuba acule ebusuku ngoba, lapho ebuthaka, ukuvukela kwakubhonga. Yindaba engenza ngicabange ukuthi angisoze ngifeza okwenzeka.
Kulesi simo, usho ukuthi ama-Afrika awabamba kanjani amanye ama-Afrika.
Bonke osomlando bakhuluma ngakho. Ngekhulu le-XNUMX, akubanga khona ukuhlaselwa, ngoba abaseNtshonalanga besaba. Bakhethe ukukhipha lo msebenzi oyingozi kakhulu obudinga ukuthi basuke endaweni yabo belwe lapho bethanda ukuxoxisana. In Alma, Ngikhombisa ukuthi ukuhweba lokhu, nemikhumbi yayo kanye nezingqinamba zazo ezigwinyile abantu, kuyihlukanise ngokuphelele kanjani i-Afrika. Lokhu kuthuthukiswa kubangelwa ukufisa ikofi noshukela emagcekeni naseYurophu. Anginaphutha ngesandla esiqondisayo. Ngemiqulu emithathu yamakhasi angama-400, ngingakhombisa ukubanzima kwale ndaba.
Izinhlamvu zakho ziyinkimbinkimbi kakhulu. Futhi ngokujulile komuntu.
Izinto zami ezingavuthiwe zingumuntu nendawo yonke kumuntu. Noma ngabe ngisekela umYurophu noma umAfrika, ngikwenza ngendlela efanayo. Wonke umlingiswa unezici eziyinkulungwane, futhi angikwazi ukuphatha ukudala i-villain ngaphandle kokukhombisa iphutha elalimenza aqonde. Angizami ukuzithethelela - Nginala udoti wangempela egalari lami lesithombe! -, kepha abaphumi esibelethweni sikanina benophawu “olubi” ebunzini labo.
Usunombono ofanele we-Marxist wobudlelwano phakathi kwabafana abahle nabafana ababi ...
Futhi kungumbono wasendulo wendaba yabo bonke ubuphakade, obuphikisana impisi newundlu. Nginemaphutha amadala omsunguli wezindaba avumelanisa isilwanyana sasekhaya esimnyama nento encane empofu ephonswa impilo. Lo mbono omile wobudlelwano esithola kuwo UTobie Lolness noJo Mitch, uhlobo lwe-real Tycoon, kuyinkomba yempilo.
Lo mzuzu emlandweni uyamangaza ngoba uphika ingxenye yobuntu
Njengengxenye yokushushunjiswa, angizange ngibe nobunzima ekwakheni umlingisi. Lo mzuzu emlandweni uyamangaza ngoba uphika ingxenye yobuntu. Futhi wonke umuntu wazuza kukho. Umbhaki ovela ekujuleni kweFrance wayengathengisa amabhisikidi akhe ngisho nasezikebheni! IYurophu yakhiwa kanjena!
Zizovelaphi izinxa ezimbili ezilandelayo?
Eyesibili iqala edolobheni laseCap-Français futhi yenzeka eSanto Domingo kanye naseLouisiana, ohlangothini lwamatshala. Kukhona nengxenye yaseYurophu, kanye nesiqalo sokuqothulwa eNgilandi, ngomlingiswa owayekhona ngempela, uThomas Clarkson, waseBrithani osemusha oqala ukulwela ukukhululwa kwezigqila. Futhi u-Alma uzohlangana futhi eVersailles ebusika ngaphambi kweMvukelo yaseFrance. IVolumu yesithathu izogxila ekuvukeleni okukhulu kweSanto Domingo. Kanye neminyakazo yokuqedwa kweYurophu engaphumelelanga, ngifuna ukubhekana nemashi kanye nalezo zikhathi lapho izigqila zizama ukuzikhulula.
Ukuphikisana engilazini yamanzi
Ipuleti elivela encwadini "Alma", ebhalwe nguTimothée de Fombelle. © JOEL SAGET / AFP
Umbango omncane uvuse umphakathi wezincwadi ekuphumeni kweAlma. Umhleli we-Anglo-Saxon weTimothée de Fombelle, i-Walker Book, unqume ukungayishicileli ngesizathu sokuthi njengomhlophe umbhali ubengeke abe semthethweni ukuyixoxa indaba yengane emnyama ebhekene nayo ubugqila. Akusikho okokuqala lapho lolu hlobo lwemibono lumenyelwa kwinkulumompikiswano: kunesikhathi lapho abanye abasindile emakamu okuhlushwa benqaba ukuthi udaba lwabo lube yincwadi yokucabanga. Kepha ukucindezela lo mbhalo kuze kube sekupheleni kungaba ukusayina incwadi yokufa yazo zonke izincwadi. UVictor Hugo othile wabhala ngesingeniso Ukuzindla: “Ngezinye izikhathi sikhononda ngabalobi abangisho. Sitshele ngathi, sibamemeza. Maye! Uma ngikhuluma nawe ngami, ngikhuluma ngawe. Awuzizwa kanjani? Ah! isiwula, ubani ocabanga ukuthi angisiye! "
Abasubathi: Umdlali wasemuva waseFrance uVilin Lavillenie aka ...
I-LDC: IBayern Munich ibhekene neFC Barcelona iwine ithikithi…
TELES RELAY 17715 izikhala 1 amazwana
Ukulandelana kukaFatou Bensouda e-ICC: abazongenela ukhetho bathwele kanzima ukukholisa - uJeune Afrique
Iminyaka engama-60 yenkululeko eBenin: umgubho onesizotha ngenxa yeCovid-19 - uJeune Afrique
Abasubathi: Umdlali wasemuva waseFrance uValentin Lavillenie ubengeke ahlanganyele…